युवा, विश्व क्रान्ति र व्याख्याको आयतन
सन्दर्भ : विश्व युवा दिवस
नरेशकुमार शाही काठमाडौं, २७ साउन
भनिन्छ– "युवा प्रकृतिका उपहार हुन् तर उमेरचाहिँ काम गर्ने कला हो ।" युवाको परिभाषा अनेक मुलुकका संवैधानिक व्यवस्था वा प्रतिवेदनका आधारमा तय भएका छन् । नेपालले पनि युवाका सन्दर्भमा मौलिक व्याख्या गरेकै छ । हाम्रो देशमा विविध अध्ययनपछि दस्तावेजहरूको मूल्यांकनका आधारमा १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा भनिएको छ ।
आज १२ अगस्ट अर्थात् विश्व युवा दिवस । विश्वमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र समुदायका आआफ्नै संस्कृति र रीतिरिवाज छन् । यिनीहरूभित्रबाटै केहीलाई विशिष्टीकृत गर्दै तिनलाई चाडपर्व, महोत्सव अथवा दिवसका रूपमा मान्यता दिइएको छ । जसलाई खुसी साट्ने माध्यमका रूपमा लिइन्छ । यसकै एउटा अंगका रूपमा लिन सकिन्छ, युवा दिवस ।
विश्व समाजको विविधताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संगठनहरू र विश्व भूमण्डलीकरणले गर्दा कतिपय व्यवहार र नियममा युवाबारे एकरूपता छ । विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका संस्थाका निर्णय यसका उदाहरण हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९९९ को महासभाको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युवा दिवस मनाउन थालिएको हो । यो निर्णयले युवाको सामाजिक पक्षमा जोड दिए पनि युवा दिवस राजनीतिक पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ । अझ भन्ने हो भने युवा दिवसको स्थापना युवा आन्दोलनको विद्रोहको सफलतासँग जोडिएको छ ।
युवा दिवसको स्थापना अथवा पहिलो घोषणा चीनले गरेको थियो । चिनियाँँ युवा दिवस ४ मेको विद्रोहसँग सम्बन्धित छ । माओको चिनियाँँ क्रान्ति सफल हुनुअगाडि चीनमा एक प्रकारको शासन व्यवस्था थियो । ४ मे १९१९ का दिन चिनियाँ युवा विद्यार्थीले तत्कालीन सरकारविरुद्ध विद्रोह गरे । तत्कालीन सत्ताको सामरिक र ऐतिहासिक ठाउँ तियानमिन स्क्वायरलाई १०औं हजार युवा विद्यार्थीको उपस्थितिले कब्जा ग¥यो । युवा विद्यार्थीको यो विद्रोहले सरकारको नैतिक धरातललाई उदांगो बनाइदियो । आत्तिएको सरकारले प्रदर्र्शनकारी माथि निर्मम दमन ग¥यो र सयौं युवा विद्यार्थीको हत्या गर्यो ।
यो विद्रोह तत्कालीन सरकारविरुद्ध चिनियाँँ युवाहरूको चेतना, साहस र बलिदानको जीवित प्रयोग थियो । युवाको यस्तो बलिदानको दिनलाई सिँगो चीनले सम्झिनु महत्त्वपूर्ण थियो । यसका लागि सिन्शिकाङशु–निङश्चा सीमान्त क्षेत्रको युवा संगठनले सबैभन्दा पहिले यस दिनलाई युवा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । युवाहरूले यसलाई चीनको राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा घोषणा गर्न तत्कालीन कोमिन्ताङ सरकारलाई दबाब पनि दिए । युवाको दबाबले कोमिन्ताङ सरकार र युवाहरूबीच ४ मेलाई युवा दिवसका रूपमा मनाउने सहमति भयो ।
युवाको चेतनाको संगठित शक्तिबाट तत्कालीन कोमिन्ताङ सरकार डराइरहेको थियो । यो दिनको स्मरणले चिनियाँँ युवामा विद्रोह र बदलावको भावना थप बलियो हुने डरले कोमिन्ताङ सरकार यो सहमति उल्लंघनको षड्यन्त्रमा लाग्योे । उसले युवा विद्यार्र्थीसँग भएको सहमति उल्लंघन गर्दै ४ मेको सट्टामा २९ मार्चलाई राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । हुन त यो दिन २९ मार्च २०११ पनि चिनियाँँ युवाले गरेको विद्रोहको दिन थियो तर ४ मेमा तुलनामा यसको प्रदर्शनको विषय सामान्य थियो । २९ मार्च २०११ को आन्दोलन ४ मे १९१९ जतिको भावनात्मक, प्रभावकारी र शक्तिशाली थिएन ।
तत्कालीन सरकारले २९ मार्चलाई राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाए पनि चीनको युवा विद्यार्थी संगठन, चिनियाँँ कम्युनिस्ट पार्टी र सत्तासँग असहमति राख्ने अन्य धेरैले ४ मेलाई नै राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाइरहे । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा चिनियाँँ क्रान्ति सफल भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चिनियाँँ सरकार बन्यो र यसले ४ मेलाई नैं चिनियाँ राष्ट्रिय युवा दिवस भनी घोषणा ग¥यो । यसलाई आजसम्म राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाइरहेको छ । जे होस्, यिनै तथ्यहरूको आधारमा पहिलो युवा दिवस चीनले मनाउन सुरु गरेको विषयमा दुई मत छैन ।
दक्षिण अफ्रिकाको युवा आन्दोलनको सवाललाई हेरौं । दक्षिण अफ्रिकाले १६ जुनलाई युवा दिवसका रूपमा मनाउँछ । यो मिति पनि अफ्रिकी युवाको विद्रोहको स्मरणका रूपमा छ । १६ जुन १९७६मा दिन दक्षिण अफ्रिकाका काला जातिका विद्यार्थीले विभेदकारी शिक्षा ऐनविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । यो विद्रोहमा बीस हजार युवा विद्यार्थी सहभागी थिए । र, यसको नेतृत्व दक्षिण अफ्रिकी विद्यार्थी संगठनले गरेको थियो । यो संगठनको स्थापना आफैंमा एक विद्रोह थियो किनभने यो गोरा विद्यार्थीको दबाबमा रहेको संंगठनबाट विद्रोह गरी निर्माण गरिएको काला विद्यार्थीको नयाँ संगठनका रूपमा स्थापना भएको थियो । यसअघि नेसनल युनियन अफ साउथ अफ्रिकन स्टुडेन्ट (नुसास) एक उदारवादी संस्थाका रूपमा स्थापना भएको भए पनि यसमा गोरा विद्यार्थीको प्रभुत्व थियो ।
त्यहाँको चर्चित ओरल्यान्डो स्टेडियम बीस हजार युवा विद्यार्थीबाट घेरियो । अफ्रिकीसहित अंग्रेजी भाषालाई देशको आधिकारिक भाषा बनाउने कुरामा संविधानले समर्थन गर्ने सवाल त्यहाँका युवालाई स्वीकार्य भएन । यो विद्रोहलाई ‘सोवेटो’ विद्रोहको नामले चिनिन्छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सरकारले गरेको त्यसबेलाको दमन (१६ जुन)को दिन ५००–७०० युवा विद्यार्थी मारिएका थिए । युवाको विद्रोही चेतनाको प्रदर्शन थियो त्यो । साउथ अफ्रिकामा युवाको वीरतापूर्ण र विद्रोहको स्मरणका रूपमा १६ जुनलाई राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
भारतमा स्वामी विवेकानन्द जन्मेको दिन १२ जनवरीलाई राष्ट्रिय युवा दिवस भनी घोषणा गरिएकोे छ र यसलाई नै युवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ । युवा दिवसको घोषणामा तत्कालीन भारतीय सरकारले स्वामी विवेकानन्द जीवित रहँदा युवाका लागि प्रेरणाको काम गरेको, उनको दर्शन र आदर्श युवाहरूका लागि प्रेरणा स्रोत हुने विश्लेषण गरिएको छ । यो निष्कर्षपश्चात् भारतले १२ जनवरी १९८४ देखि युवा दिवस मनाउँदै आएको छ । भारतले यो वर्षको राष्ट्रिय युवा दिवस पनि सम्पन्न गरेको छ । उसले यो वर्षको राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा ‘राष्ट्र निर्माणका लागि युवाहरूको साङ्लो’ भन्ने तय गरेको थियो ।
एक अर्थमा सोभियत संघको विघटन सँगसँगै रसियामा युवा दिवस मनाउने कुरा पनि विघटन भएको छ । कोम्सोमोलको स्थापनापश्चात् यसको स्थापनाको दिनलाई नै युवा दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो । जब सोभियत रसियाको विघटन भयो, रसियन कम्युनिस्ट पार्टी सत्ताबाट बाहिर गयो र तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका संरचना विघटन भए । यसले गर्दा सरकारमा रहेको प्रभाव पनि स्वाभाविक रूपमा हरायो । पार्टीको अस्तित्व संकट सँगसँगै कोम्सोमोल पनि संकटमा प¥यो । सोभियत संघको विघटन सँगै त्यहाँको त्यो युवा दिवस पनि एक अर्थमा विघटन भयो ।
सन् १९७९ मा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको ३४/१५१ को प्रस्तावले सन् १९८५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष १९८५ को मूल नारा सहभागिता, विकास र शान्ति भन्ने तय गरिएको थियो । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युवा दिवस र युवा दिवस मनाउने विषयको चर्चा हुन थाल्यो । पछि सन् १९९९ को संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २००० देखि हरेक वर्षको १२ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो ।
नेपालमा भने सन २००४ देखि अन्तर्राष्टिय युवा वर्ष मनाउन थालिएको हो । यद्यपि, यहाँको ठूलो राजनीतिक युवा संगठन तत्कालीन युवा संघ स्वयंले आफ्नो स्थापना दिवस १ जेठलाई युवा दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको थियो । यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवससम्म आइपुग्दा हामी २०औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै छौं । दुई दशकको यो यात्रा अथवा क्रम एक समीक्षाको सवाल पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको घोषणाको सवालमा शिक्षा, रोजगारी, भोकमरी, गरिबी, स्वस्थ वातावरण र लागूपदार्थ दुव्र्यसनसहित युवा प्रथामिकताका १५ वटा क्षेत्र छन् ।
यो दिवस मनाउने कुराले युवालाई थप सचेत र सक्रिय पार्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले युवाको विकास र संगठनको क्षेत्रमा ध्यान दिने र तिनका लागि कार्यक्रम तयार पार्ने धारणा अघि सार्छन् । जसको माध्यमबाट सन २०२० सम्म युवाको परिणात्मक र गुणात्मक अवस्थाको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । युवा समुदाय तत्कालीन सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य वा हालको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण र एक मुख्य क्षेत्र हो भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
पृष्ठभूमिमा युवा दिवस युवाको बलिदान र विद्रोहको स्मरणमा मनाइए पनि अहिले युवाको सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तित्व विकास तथा सुरक्षा, समाजको शान्ति र विकास साझेदारका रूपमा मनाउने प्रवृत्ति विकास हुँदै छ । यो वर्ष सन् २०१९ को अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा पनि ‘शिक्षामा रूपान्तरण’ भन्ने छ । संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो साइटमा उल्लेख गरेअनुसार १६५ सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । तर, त्यसमा केही मात्र अलि बढी प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण सवाल छन् । यसमा युवा दिवस पनि मुख्य एक हो । ३६४ दिन बिर्सिने र एक दिन सम्झिने कुराले तात्त्विक रूपमा युवा दिवसको अर्थ र महत्त्व राख्दैन ।
यसर्थ युवा दिवस मनाई रहँदा आजको विश्व व्यवस्थामा युवाको सवाल, अवस्था र आवश्यकताको विषयमा पनि प्रमुख प्राथमिकतासाथ सोच्न जरुरी छ । ठूलाठूला तारे होटलका बन्द कोठामा हुने बौद्धिक विलासिताले ठोस नतिजा निकाल्न सक्दैन । त्यसका लागि सोहीअनुसारको व्यावहारिक कार्यक्रमको निर्माण र सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ । सन् २०१५ देखि दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारणसहित विश्व समाज अगाडि बढिरहेको छ । हामीले २०औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी पनि व्यापक बहस, छलफल र कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ ।
दिगो विकासको लक्ष्यका १७ वटा क्षेत्रमध्ये धैरै सवाल युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । जसमा युवाको विकास र युवा समस्याको सम्बोधनबिना तिनको अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने कुरा निश्चित छ । युवाको सहभागिता र सक्रियताबिना विकास कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ । यसर्थ, युवाको परिचालन र साझेदारी नहुने वातावरणले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति पनि केवल चाहना मात्रै बन्नेछ ।
विश्व आर्थिक मन्दीले पारेको प्रभावको असर युवाले भोगिरहेकै छन् । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले २०१५/१६ मा गरेको अध्ययनअनुसार विश्वमा २ सय मिलियन युवा बेरोजगार छन् । प्रतिवेदनको थप अंशअनुसार २०२० मा ५०० मिलियन नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण पनि छ । यो युवा शक्ति श्रम शक्तिका रूपमा तयार छ र कामको तीव्र खोजीमा छ । यसमा चाखलाग्दो विषय रोजगारदाताले आफूलाई चाहिने योग्य वा दक्ष श्रमिक पाइरहेका छैनन् र श्रमिकले दक्षताअनुसारको श्रमको अवसर पाइरहेका छैनन् । श्रमिकले श्रम बिक्रीको बजार खोजीमा संघर्ष गरिरहेको छ र रोजगारदाताले योग्य श्रमिकको खोजीमा संघर्ष गरिरहेको छ ।
श्रमिक र श्रम बजारबीचको तादम्यता ३८ प्रतिशतमा मात्रै छ । श्रमिक र श्रम बजारबीचको यति ठूलो अन्तर हुनु यो युवाको समस्या त हुँदै हो तर विश्व अर्थतन्त्रको पनि त्यत्तिकै ठूलो र प्रमुख समस्या हो । दिगो विकासको लक्ष्यको ४ः४ मा दक्ष र सीपयुक्त श्रमिकलाई प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने रहेको भए पनि यो पर्याप्त कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । श्रम, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य युवाका मूल समस्याका रूपमा रहेको छ । तर, आजको सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव तीव्र छ । यसले गर्दा युवाका समस्या पनि व्यापक र फराकिला छन् । यसर्थ, अहिलेको सन्दर्भमा युवाका समस्या सम्बोधनको विषय विश्व समाजको गुणस्तरीय विकासको पहिलो आधार हो ।
परिवर्तन युवाबाटै सम्भव हुने विश्वव्यापी रूपमा सिद्ध भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनका ऐतिहासिक घटना र व्यावहारिक दस्तावेजले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । ख्याल राख्न जरुरी छ– युवा अवस्था आउँछ तर जीवनमा एक पटक मात्रै । एकपटक मात्रै आउने समयलाई हाम्रो समाजले ठीक मार्गमा लाग्ने उपयुक्त वातावरण दिएको छ त ? मानव सभ्यता निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण यो चरण जहिल्यै पनि परिवर्तनको विगुल फुक्नुपर्ने चर्चाको परिधिमा मात्र सीमित किन ?
(लेखक तत्कालीन युवा संघ, नेपालका महासचिव हुन् )
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २८, २०७६, १२:१५:००